Katy Perry akatsamwiswa naTaylor Swift pamusoro pebazi remuorivhi Instagram? - Nhau
Kuru Blog Macelebs Style Nhau
Katy Perry anogumbuka naTaylor Swift pamusoro pe 'olive branch' Instagram?
Zvimwe kupokana hakusi kupera mushure mezvose? NeChipiri, Katy Perry uye Taylor Swift vaiita kunge vachapedza makore-refu vachipfira mushure memutongi we'American Idol ' yakatumira Taylor bazi remuorivhi chairo , zvichiratidza rugare.
Taylor akatumira vhidhiyo ku Instagram kuti amutende zvechokwadi Katy nechiratidzo. Zvakanaka, maererano neshumo iri Zuva , Katy parizvino atsamwa nemabatiro aitwa Taylor nechipo.
'Katy aitarisira kuti Taylor aizotumira chimwe chinhu nezvazvo,' akadaro munhu akaudza Zuva Zuva. 'Asi haana kutarisira kuti tsamba chaiyo ichaenda kunzanga.'
Pamusoro peiyo olive brach yaive kadhi raibva kuna Katy. Taylor haana kuburitsa zvakazara zvemakadhi mune iyo Instagram posvo, asi akati wandei mawebhusaiti akaiswa mukati memashoko. Zvakatanga, 'Hei shamwari yekare - ndanga ndichifunga kufunga kwekusanzwanana kwakapfuura uye manzwiro pakati pedu uye ndaida kujekesa mweya ...' Pane imwe nguva Katy akanyora kuti aive 'ane hurombo kwazvo' nezve chimwe chinhu.
'Chinhu ndechekuti, iwe unogona chete kuona chikamu cheizvo zvakanyorwa naKaty uye zvinoita sekunge ari kutora mutoro wega wekupokana kwese,' akadaro masosi. 'Pasina mamiriro ezvinhu, zvinoita sekunge ari kutora mhosva yezvinhu zvese uye zviri pachena kuti pane zvakawanda zviripo pane izvozvo.'
ko khloe kardashian akaitei kuonda
Mukugovana vhidhiyo kwaari Instagram Nhau musi waMay 8, Taylor anogona kunzwika achiti, 'Saka ndinongoenda kuimba yangu yekupfeka ndokuwana iri chairo bazi remiorivhi. Izvi zvinoreva zvakawanda kwandiri. '
Akanyora vhidhiyo, 'Waita hako Katy.' Akawedzerawo akati wandei emojis emoyo.
Katy naTaylor, shamwari-imwe-nguva, vane vagara vari mhandu .
Kukakavadzana pakati paKaty naTaylor kwakatanga kutenderedza 2014 mushure mekunge muimbi we'Blank Space 'akapomera Katy kuyedza' kuparadza nhandare yese. ' Mune chinyorwa cheRolling Stone, Taylor akaburitsa pachena kuti rwiyo rwake 'Ropa Rakashata' rakanyorwa nezve musikana asina zita asina zita waanoti aive 'muvengi wake chaiye.' Runyerekupe rwakakonzera kuti ndiani uyu angave, uye vazhinji vakati ndiKaty.
Katy anga ataura kuti kupokana kuri nezvevatambi ve backup.
'Akazvitanga, uye yave nguva yekuti apedze,' Perry akaudza James Corden gore rapfuura. 'Ndakaedza kutaura naye nezvazvo uye haana kutaura neni.'
'Ndinoita chinhu chakakodzera chero nguva painonzwa sekutamba. [Ini ndakadzimiswa zvizere, uyezve iye anonyora rwiyo pamusoro pangu… ndiyo nzira yaunoda kubata nayo nayo? Karma, 'Katy akadaro. 'Zvese ndezve karma.'
Katy akazonyorova, achiti angade kuti kupokana kupere
'Ini ndinofunga pachangu kuti vakadzi pamwechete, vasina kupatsanurwa, pasina chimwe cheizvi zvidiki-,' akadaro. 'Vakadzi pamwechete vachaporesa nyika.'
Ellen DeGeneres, Portia de Rossi anowedzera kuchengetedzeka kumba mushure mekuba
Kim Kardashian anoshuvira 'musikana anotapira' North West 'zuva rekuzvarwa rinofadza' sezvo dangwe rake rinosvitsa makore matanhatu
patrick dempsey uye ellen pompeo
starshell uye mary j blige
Wendy williams akambove murume
zita remwana waJanet jackson ndiani
amy akangwara carter oosterhouse mwana
ane makore mangani alan thicke mukadzi tanya